क्यान निर्वाचनमा चन्द समूह विजयी, कसले कति मत पायो? - Namaste Post
क्यान निर्वाचनमा चन्द समूह विजयी, कसले कति मत पायो?
नमस्ते पोस्ट २०७६, ११ आश्विन शनिबार १८:०० 0
काठमाडौं: नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को नयाँ विधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट चतुरबहादुर चन्दको समूह विजयी भएको छ। निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चन्दले ५९ मतमध्ये ४४ मत ल्याएका छन् भने विनयराज पाण्डेले १५ मत ल्याएका छन्।
यससँगै चन्दले यो अपेक्षाकृत मत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘मैले विनय दाई उठ्नुभयो भने ४२ माथि अरु भयो भने ५० माथि मत आउँछ भनेको थिए। त्यहीअनुसार मत आएको छ,’ निर्वाचित अध्यक्ष चन्दले भने। उनले जितसँगै आफूलार्इ चुनौति थपिएको भन्दै मिलाएर अघि बढ्ने बताएका छन्।
शनिबार नक्सालको मेरियट होटलमा भएको चुनावमा चन्द पक्षका राजबाबु श्रेष्ठले उपाध्यक्ष पदमा ४० मत ल्याए भने पाण्डे समूहका मिङ्मा डण्डु शेर्पाको १७ मत ल्याए। सचिवमा चन्द समूहका अशोकनाथ प्याकुरेलको ४३ मत ल्याए भने उनका प्रत्यासी विनोदकुमार मैनालीले १५ मत ल्याए। त्यस्तै कोषाध्यक्षमा चन्द समूहकै रोशनकुमार सिंहको ४५ मत ल्याए भने पाण्डे समूहका उपेन्द्र भट्टराईको १२ मत ल्याए।
यसअघि प्रदेश २ को दाउद अन्सारी, प्रदेश ४ को ऋषि गौतम, प्रदेश ५ को प्रशन्तविक्रम मल्ल, प्रदेश ६ को पदम खड्का र प्रदेश ७ को विक्रम बिष्ट र महिलातर्फ जयन्ती भट्ट निर्विरोध निर्वार्चित भएका थिए।
खुला सदस्यमा चन्द समूहकै दुर्गाराज पाठकले सबैभन्दा धेरै ४२ मत ल्याए। विरेन्द्रवहादुर चन्दले ३६, माधवकुमार कर्माचार्यले ३५, सञ्जयराज सिंहले ३४, र करण महोत्रा क्षेत्रीले ३० मत ल्याएर निर्वाचित भए।
पराजित धिरेन्द्र साउदले २८, जगतबहादुर टमटाले १५, नरेश राणाले १७, पवनकुमार अग्रवालले २०, प्रफुल्ल बैद्यले १६ मत ल्याए।
प्रदेश १ मा कैलाश विष्ट र प्रदेश ३ मा अमितवीर पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। कैलाशले ३७ मत ल्याए भने उनका प्रत्यासी लाक्पा लामाले २१ मत ल्याए। प्रदेश ३ मा अमितवीरले ३९ मत ल्याए। प्रत्यासी कैलाश प्रधानले १९ मत ल्याए। प्रदेशका उम्मेदवारलाई पनि ५९ जनै प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए।